ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒါဝင်တစ်ဦးခေတ်များတွင်အမှတ်တံဆိပ်အောင်မြင်မှု – Masso Myanmar
Posted on 12 February, 2016 23 September, 2017 by vanda
အင်တာနက်ကိုစျေးကွက်တစ်ခုမရှိမဖြစ် tool ကိုဖွစျနပွေီ, သေးကွာဟချက်စားသုံးသူအမှတ်တံဆိပ်တို့တွင်အရှေးခယျြဘယ်လိုပုံဖော်အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်သဘောပေါက်ဆဲရှိပါတယ်။ အားကောင်းတဲ့ဒေတာအစု၏အကူအညီဖြင့်ကျနော်တို့စားသုံးသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခရီးကိုဖြတ်ပြီး digital ၏အဆင့်နှင့်စားသုံးသူက၎င်း၏အရည်အသွေးတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ပြီးနောက်အမှတ်တံဆိပ်ကို select လိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေအကြားဆက်ဆံရေးလေ့လာနေပါပြီ။ ကျနော်တို့ 20,000 စားသုံးသူခရီးနှင့်သူတို့တစ်လျှောက် 100,000 touchpoints ဖုံးအုပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကိုဖြတ်ပြီး 1000 အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်အချက်အလက်များကိုစုစည်း။ အဆိုပါသုတေသန (စအမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်လူသိများ) မှာစားသုံးသူရဲ့ဝယ်ယူရွေးချယ်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်အချက်များတစ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုပုံဖျော။ : ယေဘုယျအား, ထိုရှုခင်းကျွန်တော်နှင့်အခြားသူများဒစ်ဂျစ်တယ်ဒါဝင်ခေါ်ထားပါတယ်
စားသုံးသူများကပိုဒီဂျစ်တယ်အာဏာအပ်နှင်းဖြစ်လာသကဲ့သို့, အမှတ်တံဆိပ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသူတို့သက်ရောက်မှုများနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆုံးရှုံး, ပျမ်းမျှအားဖြင့်လျော့နည်းစေပါသည်။
Digital တဖြည်းဖြည်းစားသုံးသူခရီးများအတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်လာနေသည်။ ပိုပြီးအော့ဖ်လိုင်းစားသုံးသူဒစ်ဂျစ်တယ် tools တွေကိုမှပြောင်းလဲရန်နှင့်အငယ်, ဒီဂျစ်တယ် oriented စားသုံးသူဝယ်လက်များ၏ရာထူးဝင်အဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ် touchpoints အရေအတွက်သည်နှစ်စဉ် 20 ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်သည်။ အတော်များများကပြည့်ပြည့်စုံစုံဒစ်ဂျစ်တယ် tools တွေကိုသုံးပြီးနေကြသည်။ သူတို့ကိုအသုံးချလုပျသူမြား၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာများအနက် 39 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ် ( “စမ်းသပ်”) ၏ကနဦးထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်အောင်ကိုပြု၏။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနဲ့သူတို့ရဲ့ခရီး၏ပိုပြီးအထူးကြပ်မတ်အကဲဖြတ်အဆင့်နှစ်ခုလုံးအတွက်တစ်ဦးအပိုဆောင်း 42 ရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုမှုကိုဒစ်ဂျစ်တယ် tools တွေ ( “စေ့စပ်နှင့်အကြောင်းကြား”) ။ တစ်ဦးကထပ်မံ 20 ရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုမှုကိုဒစ်ဂျစ်တယ် tools တွေကိုအဆုံးသတ်-ကြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်, သူတို့ကသူတို့၏ Online ဝယ်ယူမှုဖြည့်စွက် ( “အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်”) ကိုအဆုံးသတ်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတို့တွင်အခြို့သောမှတ်သားလောက်သောအပွောငျးအလဲခရီး၏ဤ spectrum ကိုဖြတ်ပြီးနှင့်အိပ်ကြ၏။ ဆော့ဖ်ဝဲ, လေကြောင်းလိုင်း-ဘွတ်ကင်များနှင့် utilities စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်စားသုံးသူများအပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်။ အော်တို, အာမခံနှင့်အစားအစာအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်အဆင့်ဆင့်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စားသုံးသူများဆင်တူနံပါတ်များကိုအများရှိသော်လည်း, နည်းပါးလာဒီဂျစ်တယ်ဝယ်ယူတဲ့သူ။ ဆက်သွယ်ရေး, ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့်ကရိယာအတော်လေးခိုင်မာတဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဒီဂျစ်တယ်စဉ်းစားခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်စားသုံးသူများ၏နံပါတ်များကိုဒါပေမယ့်ပိုပြီးကျိုးနွံဒစ်ဂျစ်တယ်ဝယ်ယူမှုအောင်ဂဏန်းရှိသည်။
စားသုံးသူကိုပိုမိုပြည့်စုံဒစ်ဂျစ်တယ် interaction ကအတှကျရွေးချယ်အဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်-စျေးကွက်အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ကောင်းတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲခြင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစမ်းသပ်ဘို့ထက်အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်စားသုံးသူများအတွက်အနိမ့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်နေတဲ့အမှတ်တံဆိပ်သတိထားဖြစ်လာသည့်အခါအထူးသ, သူတို့ရဲ့ကူးပြောင်းနှုန်းမှာ 40 ရာခိုငျနှုနျးအထိရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်စားသုံးသူများအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သာ 25 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုတက်ကြွစွာဒစ်ဂျစ်တယ်စားသုံးသူအကြောင်းပြချက်များစွာများအတွက်အမှတ်တံဆိပ် midstream စွန့်ခွာဖို့ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးများကိုအကြောင်းကိုပြောဆိုမှုများများအတွက် Facebook, Twitter သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်-အကဲဖြတ်ပလက်ဖောင်းပူးပေါင်းကြပါပြီဖို့ပိုများပါတယ်။ ဝယ်ယူမတိုင်မီ touchpoints ၏ သာ. အရေအတွက်ကစားသုံးသူဒစ်ဂျစ်တယ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်သဘောတူညီချက်အနိုင်အထက်ကြုံတွေ့ရမည်လေးသာမှုတိုးပွားစေပါသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ကုမ္ပဏီများလွတ်လပ်စွာသူတို့ရဲ့ prepurchase interaction ကအစပျိုးသူကိုပိုပြီးဒီဂျစ်တယ်ဝါရင့်စားသုံးသူများ, ကျော်လျော့နည်းထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ လူမှုမီဒီယာအာကာသအတွင်းကြော်ငြာများ၏အဆင့်နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအော့ဖ်လိုင်းလမ်းကြောင်းများအတွက်ဘုံအဆင့်ရောက်ရှိဖို့ရှိသေးပြီးကတည်းကနှင့်အညီ, အမှတ်တံဆိပ်မက်ဆေ့ခ်ျဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနအချို့ကုမ္ပဏီများကအောင်မြင်စွာဒီယှဉ်ပြိုင်မှုလှိုင်းလေထန်သွားလာရန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြကြောင်း, သို့သော်ညွှန်ပြ။ ကြောင်းအောင်မြင်မှုများအတွက်ကွာခြားအချက်များနားလည်ရန်, ငါတို့လေးယောက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုဖြတ်ပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ် rated: ဒီဂျစ်တယ်ပါးရည်နပ်ရည်စားသုံးသူတစ်ဦးထူးထူးခြားခြားမြင့်မားသောဝေစုအကြားအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်ဖန်တီးရန်ဝယ်ယူဖြစ်စဉ်များစဉ်အတွင်းဒီဂျစ်တယ်ဖောက်သည်အစေခံရန်မှာယူဆအွန်လိုင်းမှဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကို generate လုပ်နိုင်စွမ်း အနည်းဆုံးအဖြစ်အော့ဖ်လိုင်းတစ်ဦးအဖြစ်အကောင်း, မိမိတို့အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုဖောက်သည်များ၏ဒီဂျစ်တယ်မှတ်ချက်များကိုခြေရာခံရန်နှင့်ကတိုးတက်လာဖို့သူတို့အားမှတ်ချက်များကိုသုံးပါရန်။ ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခရီးကိုဖြတ်ပြီးဝယ်ယူမှဦးဆောင်ကျေနပ် touchpoints များ၏အလေးချိန်ကိုကိုယ်စားပြုမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ညွှန်းကိန်းပြုစုအဲဒီရှုထောင့်ဖြတ်ပြီးရမှတ်များကဆက်ပြောသည်။
ကျနော်တို့ပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီခရီးများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူဤအအညွှန်းကိန်းရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကသူတို့ဒီဂျစ်တယ်စွမ်းရည်အားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထိပ်ပိုင်းနဲ့အောက်ခြေ 10 ရာခိုင်နှုန်းအကြားဒီကဗျာကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကဏ္ဍအားလုံးတွင်တလွှား, အထက် echelon ရှိသူတို့အောက်ပိုင်းအဆင့်မှာသူများထက် 2.5 ဆ သာ. ကြီးမြတ်တဲ့နှုန်းရောင်းအားဖို့အသိအမြင်ပြောင်းလဲ။ ငါတို့သည်လည်းအချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်း-software ကိုအဘို့, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနှင့်ဆပ်ပြာ-ပိုမိုမြင့်မားအမှတ်တံဆိပ်-digital ရမှတ်အမှတ်တံဆိပ်-ရောင်းအားပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အချိုးအစားမညီမျှမှုတိုးမှုသိခဲ့ရတယ်။ (ကဒစ်ဂျစ်တယ်ရမှတ်အတွက်တစ်ဦးကတဦးတည်း-ရာခိုင်နှုန်း-အမှတ်တိုးပြောင်းလဲခြင်းအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုထက် 1.5 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ ) ဤ elasticity အရှိဆုံးပါးရည်နပ်ရည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့အတွင်း၎င်းတို့၏ရာထူးတည်ဆောက်ခြင်းကဏ္ဍများ-နှင့်လျော့ကျလာသည်ဟုအကြံပြုခြင်း, ယှဉ်ပြိုင်ဘို့ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် နောက်ကျကျန်သောတက်ဖမ်းလိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းတွေကို။
သာ. ကြီးသောဒီဂျစ်တယ်စွမ်းရည်နှင့်အတူကုမ္ပဏီများအောက်ပိုင်းအဆင့်မှာကုမ္ပဏီများမှလုပ်ခဲ့တယ်ထက် 2.5 ဆ သာ. ကြီးမြတ်တဲ့နှုန်းအရောင်းပြောင်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်
တစ်ဦးကဆက်စပ်တွေ့ရှိချက်ကိုပိုမိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့အမှတ်တံဆိပ်လည်းခံတွင်း၏အပြုသဘောဆောင်သည့်စကားလုံးများ၏မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုမှအကျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ဆုတ်ယုတ်ဖြင့်တိုင်းတာသည့် elasticity 0.7 ကနေ 1.4 အရွယ်ရှိ; 1.1 Digital အဆင့်အတွက်တစ်ရာခိုင်နှုန်း-အမှတ်တိုးဘို့စကားလုံး-of ပါးစပ်အကြိုးခံစားခှငျ့အတွက်ပျမ်းမျှအားတိုးခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးဆက်မှာမိမိတို့အနိုင်ရသည့်ကုမ္ပဏီများအခမဲ့မှအကျိုးအဖြစ်အောင်မြင်သော digital နောက်ထပ်အရှိန်အဟုန်ဖန်တီးသောကွောငျ့ဖွစျသညျအကြံပြုချက်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်အပြုသဘောမှတ်ချက်များအားဖြင့်ထုတ်ပေးမီဒီယာ, “ရရှိခဲ့ပါတယ်” ။
တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသောပတ်ဝန်းကျင်အဘို့အညာဘက်ကို DNA ကို
ဒါဝင်ကသေချာပေါက်ဆက်လက်ရှင်သန်ကြောင်းအင်အားအကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်အများဆုံးအသိဉာဏ်မျိုးစိတ်မယ့်နားလည်ပေမယ့်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုရှိသူများ။ ကုမ္ပဏီများကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရှာအံ့သောငှါအဖြစ်, သူတို့ကအောက်ပါစဉ်းစားသင့်:
တောင်မှရိုးရာကဏ္ဍများအတွက်ကုမ္ပဏီများမှသစ်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်များချမှတ်နေကြသည်, ထိုကလက်ရှိသမ္မတတစ်ဦးအတွက်နှိုးဆော်ချက်ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါ Benelux နိုင်ငံများနှင့်ပြင်သစ်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင်ဥပမာ, နှစ်ခုသက်သက်သာဒစ်ဂျစ်တယ်ကုမ္ပဏီများမှပေါ်ထွက်လာပါပြီ: မိုဘိုင်းဗိုက်ကင်းနှင့်အခမဲ့။ နှစ်ဦးစလုံးဟာ Benelux နိုင်ငံများရှိ 52 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပြင်သစ်တွင် 44 ရာခိုင်နှုန်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းပျမ်းမျှနှိုင်းယှဉ်, အသီးသီးအလွန်အားကောင်းတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲခြင်း-70 နှင့် 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုခံစား။ ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီများ, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆင့်ပို့ဆောင်ဒီဂျစ်တယ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာပါဝင်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမှတ်ပြုမှု၏မြင့်မားမရရှိစသဖြင့်ဒီလုပ်ရပ်ပြီးမြောက်။ အပြုသဘောဘက်ဇ်၏အလွန်မြင့်မားကိုစဉ်အခမဲ့သာက်ဘ်ဆိုက်များ, ဘလော့ဂ်များ, နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာသုံးပြီးသိသိသာသာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်မရှိဘဲ၎င်း၏မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းဗိုက်ကင်းနှင့်အခမဲ့နှစ်ဦးစလုံးဖောက်သည်ပုံမှန်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်း other.In တစ်ဦးချင်းစီကကူညီဘယ်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်-ရုပ်သံလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဖန်တီးကြဘဏ္ဍာရေး Times နှင့် New York Times ကိုအောင်မြင်စွာသူတို့ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များ၏အသိအမြင်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုဒစ်ဂျစ်တယ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုဝတ်ဆင်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ် interaction ကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားသတင်းစာများကျဆင်းနေပုံနှိပ်စောင်ရေနဲ့ကြော်ငြာဝင်ငွေ၏မျက်နှာကိုသိသိသာသာသူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်-ကြေးပေးသွင်းရငွေများတိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဒီဂျစ်တယ်ပါးရည်နပ်ရည်ကုမ္ပဏီများနှင့်တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စောစောကုမ္ပဏီများအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုတက်ပုံအဖြစ်ဗူး၏ကျန်ပြီးသားကိုင်တာများအကြား polarization ။ သူတို့ရဲ့ဝယ်ယူမှုတိုးမြှင့်ဖို့ဖောက်သည်နေစဉ်ကြောင့်လူမှုမီဒီယာအကြံပြုချက်များတစ်အစွမ်းထက်ယှဉ်ပြိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာရသည်။ positive စားသုံးသူဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများကိုလည်းအရှင်ထပ်ဝယ်ယူမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြုစုပျိုးထောင် “စေးကပ်” တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့တိုးမြှင့်။
Digital, အလုံးစုံ, တစ်ဦးမျှမ-နောင်တ play ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, အချို့ချန်နယ်လ်အချို့စက်မှုလုပ်ငန်းများပိုမို resonate ။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုလက်လီကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါကျနော်တို့လူမှုမီဒီယာနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ထိထိရောကျရောအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ်လ်ပြုသကဲ့သို့ဝယ်ယူမှုသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကူးပြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အွန်လိုင်းရှာဖွေမှုများကိုပြောင်းလဲစားသုံးသူအတွက်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ်လ်ထက်ငါးဆပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့နှစ်ခုအီတလီဘဏ်များသည်။ သော့ချက်, သင့်ဖောက်သည်ကိုသိမှန်ကန်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်သံလိုင်းထုတ်တွက်ဆ, သင်၏ဂေဟစနစ်ကိုတည်ဆောက်စဉ်ကဤအသိအမြင်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူဖောက်သည်အတွက် reel ဖို့ပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်လာအဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေးကုမ္ပဏီများအတွက်နည်းလမ်းနှစ်ခုလျှော့ချနိုင်သည်။ သို့သော်ဒီဂျစ်တယ် ချန်နယ်လ်-ရရှိမှု, ဖောက်သည်ဦးစားပေး၏နက်ရှိုင်းတဲ့နားလည်မှုဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများသောင်မတင်, နှင့်ပူဇော်သက္ကာများကိုတိုးတက်အောင်ကျွမ်းကျင်ဖို့အလျင်အမြန်ပြောင်းရွေ့ကြပြီအမှတ်တံဆိပ် လူမှုရေးကနေတဆင့်တုံ့ပြန်ချက်-နေကြသည်ရိုက်နှက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်းတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်တည်ထောင်။
ရင်းမြစ်: McKinsey လပတ်
Jacques Bughin မက်ကင်ဆေးရဲ့ဘရပ်ဆဲလ်ရုံးတစ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။
Posted in ဒစ်ဂျစ်တယ်Tagged alignment, content, css, export, markup